Intle, ithule, yabucala, iphangaleleyo, indawo yeendwendwe.
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguSherry
Sinikezela ngesango lokungena labucala elinethambeka, iveranda yabucala, ekwabelwana ngayo kwiveranda, indawo yomlilo yegesi, iWiFi ekhawulezayo, intambo eneTV ezimbini, iwasha / isomisi, kunye nemibono emihle.
Indawo yethu ikwangumsebenzi omangalisayo osuka kwindawo yasekhaya. Sinikezela ngeWiFi ethembekileyo ekhawulezayo, eneofisi kunye namaziko ekopi kwimizuzu emihlanu yesuite yethu.
NgoFebruwari ka-2021 sithenge umatrasi omtsha kunye nebhokisi yebhokisi ukuze ulale kakuhle! Siphinde songeze i-oveni yokuhambisa ekhitshini ebonelela ngeendlela zokupheka ezininzi.
Nokuba ufuna indlela eswiti, okanye indawo ezolileyo yokusebenza ukude, siyakugubungela! Sinikezela ngezaphulelo zokubhukisha ngeveki, kwaye sihlala ixesha elide ngaphezulu kweentsuku ezingama-28.
Hlala phambi kwendawo yomlilo yegesi elawulwa kude ngencwadi elungileyo okanye ubukele imuvi oyithandayo. Zijike everanda, okanye ukhuselwe kumgangatho wokuthomalalisa okanye umamele iintaka zethu kwi-arboretum yethu esemva kweyadi.
IDolophu yaseNaperville ibonelela ngezinto ezininzi ezimnandi ngexesha lonyaka, kunye nokuhamba komlambo, imyuziyam yaBantwana, ivenkile, kunye neendawo zokutyela, zonke zingaphakathi kweebhloko ezimbalwa. Luhambo lweemayile ezintathu, okanye uhambo lwemizuzu eli-10 ukuya apho. INaperville ineegaraji zokupaka ezininzi, indawo yokupaka ezitalatweni, okanye ungafowunela i-Uber!
Ntsibela kwi-I88 indlela yokurhafisa ukusuka kwikhaya lethu kukuhamba ngemizuzu emihlanu. Indlela ekhawulezayo yokuhamba!
Siyimizuzu emi-5 ukusuka kwiYunivesithi yaseBenedictine, imizuzu eyi-10 ukusuka kwiKholeji yaseNorth Central, kunye nemizuzu engama-20 ukusuka kwiKholeji yaseWheaton. Indawo entle yokuhlala kwaye undwendwele umfundi owuthandayo wekholeji!
Ifumaneka kwimizuzu nje eli-10 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe saseNaperville unokuthatha isigqibo sokukhwela uye eChicago ngolu suku!
Kumsebenzi okude, kukho indawo enkulu yokusebenza enombono we-arboretum entle. Sine-Wifi ekhawulezayo, kunye nezinto ezininzi zeofisi xa uphelelwa yinto. I-UPS, iStaples, kunye neKinkos ziyimizuzu emi-5 ukusuka kuthi.
Simi kwiikhilomitha nje ezintathu ukusuka kumbindi wedolophu yaseNaperville. Kukho iivenkile ezininzi zodidi oluphezulu, kunye neendawo zokutyela kuzo zonke iindidi, kunye nohambo lwethu oluhle lomlambo, unokuchitha imini yonke apho ngokulula.
IMorton Arboretum ikwimizuzu nje eli-15 kude. Indawo entle yokubalekela imini. Vula unyaka wonke, kunye neendlela zokuhamba, indalo yokuhlola, ivenkile yezipho, iindawo zokutyela, kunye nokukhwela i-tram (ixesha lonyaka). Bakwanikezela ngeziganeko zonyaka. Indlela entle kakhulu yokuphumla!
Siyafumaneka kwizakhiwo ukuze siphendule nayiphi na imibuzo onokuba unayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Naperville